HD 222582 - ဝီကီပီးဒီးယား
23° 41′ 51.53″
–05° 59′ 08.7″
ပကတိ အရွယ်အစား (V)
7.685 ± 0.005
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) 11.5 ± 0.2 km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: -144.88 ± 0.88 mas/yr
Dec.: -111.93 ± 0.56 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 23.94 ± 0.74 mas
အကွာအဝေး ၁၃၆ ± ၄ ly
(၄၂ ± ၁ pc)
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) 4.44 ± 0.12
ဒြပ်ထု 1.00 M☉
အချင်းဝက် 1.16 ± 0.07 R☉
တောက်ပမှု 1.2 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား(log g) 4.34 ± 0.10 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 5776 ± 70 K
သတ္တုကြွယ်ဝမှု [Fe/H] -0.01 ± 0.07 dex
လှည့်ပတ်အလျင် (v sin i) 1.5 ± 1.0 km/s
စတီလာ သက်တမ်း 6.16 Gyr
BD-06° 6262, GC 32912, HD 222582, HIP 116906, NLTT 57682, SPOCS 1030, SAO 146849.
HD 222582bData Simbad
HD 222582 သည် ကုံ နက္ခတာရာမှ အလင်းနှစ် ၁၃၅ နီးပါးခန့်ကွာဝေးသော ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ယင်းကြယ်၌ နေစကြာဝဠာပြင်ပဂြိုဟ် လှည့်ပတ်နေသည်ဟု Steven Vogt ဆိုသူက ကြေညာခဲ့သည်။ ပတ်လမ်းကျယ်၌ ကြယ်ပုနီ အဖော်ကြယ်တစ်စင်းလည်း တည်ရှိသည်။
HD 222582 ဂြိုဟ်စနစ်
b >7.75 MJ 1.35 572 0.76 — —
c (အတည်မပြုရသေး) >0.0513 MJ 0.12 15.144 0.5632 — —
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Validation of the new Hipparcos reduction" (2007). Astronomy and Astrophysics 474 (2): 653–664. doi:10.1051/0004-6361:20078357. Bibcode: 2007A&A...474..653V. Vizier catalog entry
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ၂.၆ ၂.၇ Fuhrmann၊ Klaus (February 2008)၊ "Nearby stars of the Galactic disc and halo - IV"၊ Monthly Notices of the Royal Astronomical Society၊ 384 (1): 173–224၊ Bibcode:2008MNRAS.384..173F၊ doi:10.1111/j.1365-2966.2007.12671.x
S. S. Vogt (2000). "Six New Planets from the Keck Precision Velocity Survey". The Astrophysical Journal 536 (2): 902–914. doi:10.1086/308981. Bibcode: 2000ApJ...536..902V.
D. Raghavan (2006). "Two Suns in The Sky: Stellar Multiplicity in Exoplanet Systems". The Astrophysical Journal 646 (1): 523–542. doi:10.1086/504823. Bibcode: 2006ApJ...646..523R.
HD 222582 Image။ Simbad။
ကိုဩဒိနိတ်: 23h 41m 51.5299s, −05° 59′ 08.726″
ဤ ကြယ်များနှင့် ဆက်စပ်သော ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=HD_222582&oldid=699243" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။